सुन - Aarthiknews
शनिबार, ११ असार २०७९ Saturday, 25 June, 2022
त्रिवि विमानस्थलबाट १ सय ग्राम सुन बरामद
शुक्रबार, १० असार २०७९
सलाम एयरवेजको उडान नं ४२७ मार्फत ओमनबाट आएका सिराहाका निरञ्जनकुमार सिंहको साथबाट आज १०० ग्राम सुन बरामद गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख भन्सार प्रशासक महेश भटराईका अनुसार पक्राउ परेका...
सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु ३०० ले घटेर रु ९७ हजार २०० आएको छ । पहेँलो धातु अघिल्लो दिन प्रतितोला रु ९७ हजार ५०० मा कारोबार भएको...
विहीबार, ०९ असार २०७९
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज सामान्य बढेको छ । हिजो सुनको मूल्य प्रतितोला ९७ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा दुई सयले बढेको हो । ...
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज घटेको छ । हिजो सुनको मूल्य प्रतितोला ९७ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा ४ सय रुपैयाँले घटेको हो । ...
मंगलबार, ०७ असार २०७९
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले मंगलबारका लागि सुनचाँदीको दरभाउ सार्वजनिक गरेको छ । महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९७ हजार ७ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने तेजावी प्रतितोला...
आइतबार घट्यो सुनकाे मूल्य, यस्तो छ आजको भाउ
आइतबार, ०५ असार २०७९
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज घटेको छ । हिजो सुनको मूल्य प्रतितोला ९७ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा ३ सय रुपैयाँले घटेको हो । ...
शुक्रबार, ०३ असार २०७९
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले शुक्रबारका लागि सुनचाँदीको भाउ सार्वजनिक गरेको छ । महासंघले सार्वजनिक गरेको भाउ अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९७ हजार ८ सय रुपैयाँ रहेको छ भने...
सुनको मूल्यमा निरन्तर गिरावट, आज पनि ६ सयले घट्यो
बुधबार, ०१ असार २०७९
नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा आज पनि घटेको छ । हिजो सुनको मूल्य प्रतितोला ९७ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा ६ सय रुपैयाँले घटेको हो । मंगलबार सुनको...
मंगलबार, ३१ जेठ २०७९
नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा आज पनि घटेको छ । हिजो सुनको मूल्य प्रतितोला ९८ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा १८ सय रुपैयाँले घटेको हो । ...
तीन सय रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य
नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा आज घटेको छ । हिजो सुनको मूल्य प्रतितोला ९९ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा तीन सय रुपैयाँले घटेको हो । ...
सुनको मुल्य १५ सयले बढ्यो, तोलामै एक लाख नजिक
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मुल्य प्रतितोला छापावाल ९९ हजार दुई सय रुपैयाँ र तेजावी सुनको मुल्य प्रतितोला ९८ हजार सात सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आज...
प्रतितोला पाँच सयले बढ्यो सुन, चाँदीको मुल्य स्थिर
विहीबार, २६ जेठ २०७९
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बिहिबारका लागि सुनचाँदीको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । महासंघका अनुसार आज सुनको मुल्य प्रतितोला पाँच सय रुपैयाँले बढेको छ भने चाँदीको मुल्यको स्थिर रहेको छ ।...
सुनको मुल्य स्थिर रहँदा चाँदीको मुल्य बढ्यो
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बुधबारका लागि सुनचाँदीको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । महासंघका अनुसार आज सुनको मुल्य स्थिर रहेको छ भने चाँदीको मुल्य पाँच रुपैयाँले बढेको हो । आज छापावाल...
प्रतितोला छ सयले ओरालो लाग्यो सुनको मुल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
मंगलबार, २४ जेठ २०७९
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले मंगलबारका लागि सुनचाँदीको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९७ हजार पाँच सय रुपैयाँ रहेको छ भने तेजावी सुनको मूल्य...
सर्ट, पेन्ट र अण्डरवेयरमा सुनको पेस्ट लगाएर अवैध सुन ल्याउने विमान स्थलबाट पक्राउ
सोमबार, २३ जेठ २०७९
पक्राउ पर्नेहरूमा रुपन्देही सैनामैना नगरपालिका-१ बस्ने गुल्मी ठेगाना भएका ४२ वर्षीय सुरेश बहादुर शाही, कपिलवस्तु बाणगंगा नगरपालिका-८ ठेगाना भएका २९ वर्षीय सन्दिप चन्द ठकुरी, काठमाडौं बौद्ध बस्ने बारा जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका-१६...
सुनको मुल्य दुई सयले बढ्यो, चाँदीको कति ?
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सोमबारका लागि सुनचाँदीको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९८ हजार एक सय रुपैयाँ रहेको छ भने तेजावी सुनको मूल्य...
शुक्रबार, २० जेठ २०७९
नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा आज बढेको छ । हिजो सुनको मूल्य प्रतितोला ९७ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा ९ सय रुपैयाँले बढेको हो । ...
चार सय रुपैयाँले बढ्यो सुनको मूल्य
विहीबार, १९ जेठ २०७९
नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा आज बढेको छ । हिजो सुनको मूल्य प्रतितोला ९७ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा चार सय रुपैयाँले बढेको हो । ...
नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा आज घटेको छ । हिजो सुनको मूल्य प्रतितोला ९८ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा ८ सय रुपैयाँले घटेको हो । ...
मंगलबार, १७ जेठ २०७९
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले मंगलबारका लागि सुनचाँदीको दरभाउ सार्वजनिक गरेको छ । महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ प्रतितोला ९८ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ भने तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ९७ हजार...
यस्तो छ आज सुनको भाउ
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आइतबारका लागि सुनचाँदीको दरभाउ सार्वजनिक गरेको छ । महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ प्रतितोला ९८ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ भने तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ९७ हजार...
नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा आज सामान्य वृद्धि छ । हिजो सुनको मूल्य प्रतितोला ९७ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा दुई सय रुपैयाँले बढेको हो । बिहिबार सुनको...
चार सय रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य
विहीबार, १२ जेठ २०७९
नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा आज घटेको छ । हिजो सुनको मूल्य प्रतितोला ९८ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा चार सय रुपैयाँले घटेको हो । बुधबार सुनको मूल्य...
केहि दिनदेखि स्थिर रहेको नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा आज सामान्य वृद्धि भएको छ । हिजो सुनको मूल्य प्रतितोला ९८ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा २ सय रुपैयाँले बढेको हो...
मंगलबार, १० जेठ २०७९
महासंघले सार्वजनिक गरेको मूल्यसूची अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९८ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ९७ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।...
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आइतबारका लागि सुनचाँदीको दरभाउ सार्वजनिक गरेको छ । महासंघले सार्वजनिक गरेको मूल्यसूची अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९८ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने तेजावी...
एक हजारले बढ्यो सुनको मूल्य, यस्तो छ आजको भाउ
नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा आज पनि बढेको छ । हिजो सुनको मूल्य प्रतितोला ९६ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा एक हजार रुपैयाँले बढेको हो । बिहिबार सुनको...
बिहीबार पाँच सयले बढ्यो सुनको मूल्य
विहीबार, ०५ जेठ २०७९
नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा आज बढेको छ । हिजो सुनको मूल्य प्रतितोला ९५ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा ५ सय रुपैयाँले बढेको हो । बुधबार सुनको मूल्य...
घट्यो सुनको मूल्य, यस्तो छ आजको भाउ ?
नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा आज घटेको छ । हिजो सुनको मूल्य प्रतितोला ९६ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा ९ सय रुपैयाँले घटेको हो । ...
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आज मंगलबारका लागि सुनचाँदीको भाउ सार्वजनिक गरेको छ । महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९६ हजार ७ सय कायम गरिएको छ भने तेजावी सुनको...
मुद्रास्फीतिलाई कम गर्न बेलायतको एक कम्पनीले तलबको सट्टा सुन दिन थाल्यो
स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार वित्तीय सेवा प्रदायक कम्पनी TallyMoney ले अब आफ्ना कर्मचारीहरूलाई तलबको सट्टामा सुन दिने तयारी गरेको छ। समाचारमा, 'कम्पनीका सीईओ क्यामरुन पेरीलाई उद्धृत गर्दै विदेशी सञ्चारमाध्यले लेखेका छन...
आइतबार, ०१ जेठ २०७९
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जेठ १ गते अर्थात आज आइतबारका लागि सुनचाँदीको भाउ सार्वजनिक गरेको छ । महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९६ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम...
विहीबार, २९ बैशाख २०७९
नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा आज बढेको छ । हिजो सुनको मूल्य प्रतितोला ९७ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा सात सय रुपैयाँले बढेको हो । ...
सुनको मूल्यमा निरन्तर गिरावट
सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला एक हजारले घटेर ९७ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । पहेंलो धातु अघिल्लो दिन प्रतितोला ९८ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । ...
मंगलबार सात सयले घट्यो सुनको मूल्य
मंगलबार, २७ बैशाख २०७९
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज घटेको छ । हिजो सुनको मूल्य प्रतितोला ९८ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा ७ सय रुपैयाँले घटेको हो । ...
सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि, यस्तो छ आजको भाउ
नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा आज सामान्य वृद्धि भएको छ । हिजो सुनको मूल्य प्रतितोला ९८ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा एक सय रुपैयाँले बढेको हो । ...
कति छ आज सुनको भाउ ?
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आज आइतबारका लागि सुनचाँदीको भाउ सार्वजनिक गरेको छ । महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९८ हजार ६ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने तेजावी...
शुक्रबार ६ सयले घट्यो सुनको मूल्य
शुक्रबार, २३ बैशाख २०७९
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज घटेको छ । हिजो सुनको मूल्य प्रतितोला ९८ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा ६ सय रुपैयाँले घटेको हो । बिहिबार सुनको मूल्य...
विहीबार, २२ बैशाख २०७९
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज बढेको छ । हिजो सुनको मूल्य प्रतितोला ९७ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा १४ सय रुपैयाँले बढेको हो । ...
सुनको मूल्यमा निरन्तर गिरावट, कति छ आजको भाउ ?
मंगलबार, २० बैशाख २०७९
केहि दिन यता नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा निरन्तर गिरावट आएको छ । हिजो सुनको मूल्य प्रतितोला ९८ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा एक हजार रुपैयाँले घटेको हो...
मिक्सरमा लुकाएर १०० ग्राम सुन ल्याउने विमानस्थल प्रहरीको नियन्त्रणमा
विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले चेकजाँच गर्ने क्रममा उनले ल्याएको मिक्सरको भित्री भागमा फल्स बटम बनाइ करिब १०० ग्राम सुनलाई बाहिर कालो टेपले बेरेर लुकाइ ल्याएको फेला परेको भट्टराईले बताए। यस्तो...
आठ सय रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य
सोमबार, १९ बैशाख २०७९
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज घटेको छ । हिजो सुनको मूल्य प्रतितोला ९९ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा ८सय रुपैयाँले घटेको हो । ...
आइतबार सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज सामान्य गिरावट भएको छ । हिजो सुनको मूल्य प्रतितोला ९९ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा २ सय रुपैयाँले घटेको हो । ...
विमानस्थलका सरसफाइकर्मीसमेत सुन तस्करीमा संलग्न
शुक्रबार, १६ बैशाख २०७९
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कर्मचारी नै सुन तस्करसँग मिलेमतो गरेका घटना पनि सार्वजनिक भएको थियो । तर यसपाली भने विमान सरसफाइकर्मीसमेत सुन तस्करीमा संलग्न भएको खुलेको छ । उनीहरुमार्फत दुई किलो...
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज बढेको छ । हिजो सुनको मूल्य प्रतितोला ९८ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा १२ सय रुपैयाँले बढेको हो । ...
विहीबार, १५ बैशाख २०७९
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आजका लागि सुनचाँदीको भाउ सार्वजनिक गरेको छ । महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९८ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ९७...
सुनको मूल्यमा निरन्तर गिरावट, यस्तो छ आजको भाउ
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज पनि घटेको छ । हिजो सुनको मूल्य प्रतितोला ९९ हजार ३ सयमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा ३ सयले घटेको हो । मंगलबार पनि सुनको मूल्य...
मंगलबार, १३ बैशाख २०७९
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज पनि घटेको छ । हिजो सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख २ सयमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा ९ सयले घटेको हो । सोमबार पनि सुनको मूल्य...
सोमबार सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट
सोमबार, १२ बैशाख २०७९
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज घटेको छ । हिजो सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख ५ सयमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा ३ सयले घटेको हो । ...
मेलम्चीमा यस पटक पनि बाढीको तनाब, मध्यराती बगायो पुल
न्यादीको विजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडियो, आयोजनाबाट व्यवसायिक विद्युत उत्पादन सुरु
२६ नगरपालिका र १९ गाउँपालिकाले ल्याउन सकेनन् बजेट
अर्थ मन्त्रलायलाई संसदीय समितिको कडा निर्देशन, उद्योगी मारा अन्तशुल्क हटाउनु
अमेरिकामा गर्भपतन गर्न नपाइने, देशव्यापी विरोध सुरु
प्रचण्डलाई लाग्यो फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने रहर
मन्त्रीको कारणले एकिकृत समाजवादी पार्टी नै धरापमा
जसपा र लोसपा एकिकरणका लागि दुइ तर्फी प्रयास जारी
मतदाता नामावली दर्ता अब घरबाटै
नौ दिनमै चार सहकारी कालोसूचीमा, कुन–कुन परे (सूचीसहित)
नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको साधारण सभा असार ३१ गते
बाहिरी चक्रपथबारे १५ दिनभित्र जानकारी गराउन निर्देशन
भारतमा महादानीको उदय, आफ्नो जन्मदिनमा ६० करोड दान गरे
ङादी ग्रुप पावरलाई १५० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि बोर्डको अनुमति
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले ऋणपत्र निष्कासन गर्न सेबोनमा निवेदन दियो
करिब पाँच सय बोरा अवैध चिनी बरामद